नयाँ शक्तिकै खोजी हो तर बाटो मात्रै थोरै मोडेको ः भट्टराई - Peacepokhara.com
नयाँ शक्तिकै खोजी हो तर बाटो मात्रै थोरै मोडेको ः भट्टराई
पिस पोखरा २० आश्विन २०७४, शुक्रबार १९:२८
वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बनाउँछु भनेर माओवादी केन्द्र छाडेका डा. बाबुराम भट्टराई फेरि एमाले र माओवादीको चुनावी तालमेलसँगै पार्टी एकता गर्ने सहमतिमा मिसिएका छन् । तीन दलबीच आगामी प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभामा चुनावी तालमेल गर्ने र लगतै पार्टी एकता गर्ने सहमति भएको छ । यति मात्र होइन, भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टी आगामी चुनावमा सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्ने भएका छन् । भट्टराईले वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बनाउने अभियान विर्सजन गरेका हुन् ? यसै सन्दर्भमा डा. भट्टराईसँग गरेको कुराकानीः
एमाले र माओवादीसँग पार्टी एकताको सहमतिसँगै नयाँ शक्ति बनाउने अभियान विसर्जन भयो होइन ?
नेपालमा नयाँशक्तिको ऐतिहासिक आवश्यकता छ । वैकल्पिक राजनीतिको विश्वव्यापी ट्रेन्ड पनि देखापरेको छ । त्यसैले वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणको हाम्रो लक्ष्य छ, त्यसमा हामी अहिले पनि दृढ छौं । तर, लक्ष्य प्राप्त गर्ने बाटो समयअनुकुल फेरबदल हुन्छ । एउटै बाटोबाट मात्र लक्ष्यमा पुगिन्छ भन्ने छैन । त्यसैले अहिले हामीले बाटो थोरै मोडेकै हो ।
अर्को, तत्काल हामीले के पनि देख्यौं भने नेपालमा जुन राजनीतिक अस्थिरता छ, पटक-पटकको सरकार परिवर्तनले विकास र समृद्धिको जनचाहना पूरा हुन सकेको छैन । त्यसलाई समेत मध्यनजर गर्दै विचार मिल्ने वाम, प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक, देशभक्त शक्तिहरुको बीचमा तालमेल गरेर जान सकियो भने स्थिर सरकार बन्छ । र, भोलिका निम्ति नयाँ वैकल्पिक राजनीतिक धार निर्माण गर्ने मार्ग पनि प्रशस्त हुन्छ । त्यहीअनुसार यो प्रयत्न गरिएको हो ।
तर, धेरैले अनेपक्षित मानेका छन् । यदि तपाईंहरुको यो प्राकृतिक गठबन्धन हो भने किन मानिसहरुले यसलाई स्वाभाविक रुपमा लिन सकेनन् ?
कुनै पनि ऐतिहासिक घटना अपेक्षित हुँदैन । इतिहास निर्माताहरुले अपेक्षित काम मात्र गर्दैनन् । धेरै कुरा अनपेक्षित नै हुन्छ । मुख्य कुरा अहिलेको ऐतिहासिक आवश्यकता हो कि होइन भन्ने हो । त्यसरी हेर्दा नयाँ संविधान बनेपछि पहिलो प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुँदैछ, त्यसले आगामी ४/५ वर्षको राजनीतिक दिशा निर्देश गर्छ । त्यसक्रममा नयाँ ढंगले ध्रुवीकरणको प्रयत्न गर्नु स्वाभाविक हुन्थ्यो र त्यो नै भएको हो । यसलाई अनपेक्षित वा अदृश्य चलखेल भन्नु जायज होइन । यो राजनीतिक नेतृत्वले सुझबुझपूर्ण र दूरदर्शी तवरले गरेको निर्णय हो । त्यसैले यसलाई सहज मान्नुपर्छ ।
तर, कुनै पूर्वसंकेत थिएन । सबै दशैं मनाइरहेका बेला तपाईंहरुले तालमेल मात्र होइन, एकता नै गर्ने घोषणा गरेपछि यसलाई अनेपक्षित रुपमा लिनु स्वाभाविक होइन र ?
यो आजको भोलि भएको सहमति होइन । विभिन्न प्रयत्न भइरहेका थिए । त्यसक्रममा यो ढंगले अगाडि बढ्दा सबैको सोचमा समानता भेट्यौं । खासगरी नयाँशक्तिको तर्फबाट भन्नुपर्दा यो पनि नयाँशक्ति निर्माणको वैकल्पिक बाटो हो भन्ने हामीले ठान्यौं र हामी इमानदारितापूर्वक नै यो प्रक्रियामा समाहित भयौं । हामीले अहिले चुनावी तालेमल र त्यसपछि पार्टी ध्रुवीकरणको नयाँ वैकल्पिक शक्ति निर्माणमा इमानदारितापूर्वक नै लाग्छौं ।
एमालेले पहिलो पार्टी हुनेछ, माओवादीलाई बलियो तेस्रो हैसियत सुरक्षित गर्नुछ र नयाँशक्तिलाई आफू जोगिनु छ । त्यसैले पार्टी एकता भन्ने मात्र हो, यो चुनावी स्वार्थको गठवन्धन हो भन्छन् नि ?
भनेपछि एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बन्छ ?
यो चुनावलगत्तै हुन्छ ?
हिजो कांग्रेस, एमाले र माओवादीले समृद्धिको नेतृत्व गर्न सक्दैनन् । तीन ठूला दल भ्रष्टाचार, कुशासन र सत्ताको खेलमै डुबेका छन् भन्नुहुन्थ्यो । आज उनीहरुसँगै मिलेर नयाँ पार्टी बनाउँछु भन्दै हुनुहुन्छ । कसरी विश्वास गर्ने ?
परिस्थिति गतिमान हुन्छ । हिजो एउटा सन्दर्भमा जे परिस्थिति थियो, त्यही ढंगले विश्लेषण गर्‍यौं । परिस्थिति फेरिएपछि नयाँ ढंगले विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसरी हेर्दा जसलाई हामीले पाँच-स भनेका छौं, समृद्धि, समानुपातिक समावेशी लोकतन्त्र, सुशासन-सदाचार, स्वाधिनता र समुन्नत समाजवादको लक्ष्यमा हामी अहिले पनि दृढ छौं । यो पुरा गर्न पुराना पार्टीहरुको समेत नयाँ ढंगको रुपान्तरण गरेर अगाडि बढ्न सकियो भने वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ । साभार ः अनलाईनखबर
२० आश्विन २०७४, शुक्रबार १९:२८
पिस पोखरा २४ कार्तिक २०७१, सोमबार ०४:३१
पिस पोखरा ५ फाल्गुन २०७४, शनिबार ०१:५५
पिस पोखरा २ श्रावण २०७२, शनिबार ०८:४१